အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် Ida မုန်တိုင်းကြောင့် မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့် လူ ၄၀ ကျော် သေဆုံး - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတစ်ခွင် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နှင့် ၂ ရက်နေ့များ၌ Ida မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန်များမှ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများကြောင့် လူပေါင်း ၄၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ယင်းခရိုင်တွင် စက်တင်ဘာ ၁ ရက် ညပိုင်းက Ida မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန်များကြောင့် မိုးရွာသွန်းမှုမှာ တစ်ခါတရံတွင် မမျှော်မှန်းထားသည့်နှုန်းဖြင့် ရွာသွန်းခဲ့ကြောင်း၊ မြေအောက်ရထားဘူတာရုံများတွင် ကြောက်မက်ဖွယ် ရေဖုံးလွှမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နေအိမ်များနှင့် အဝေးပြေးလမ်းပေါ်ရှိ ကားများလည်း ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ကြောင်း လူမှုမီဒီယာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဗီဒီယိုများအရ သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ရှိ ရေဖုံးလွှမ်းနေသော လမ်းမတစ်နေရာတွင် မော်တော်ယာဉ်များ နစ်မြုပ်နေသည်ကို စက်တင်ဘာ ၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း လူဝီစီယားနားပြည်နယ်တွင် ဩဂုတ် ၂၉ ရက်က ဝင်ရောက်ခဲ့သော အဆင့် ၄ သတ်မှတ်ထားသော ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၂၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း နယူးဂျာစီပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Phil Murphy က စက်တင်ဘာ ၂ ရက်၌ ကြေညာခဲ့သည်။
“သေဆုံးသူအများစုက ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့် သူတို့ရဲ့ကားတွေထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေဖြစ်ပြီး ရေဖုံးလွှမ်းသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Murphy က တွစ်တာ၌ ရေးသားထားသည်။
နယူးယောက်စီးတီးတွင်လည်း သေဆုံးသူ ၁၂ ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့ကြောင်း မြို့တော်ဝန် Bill de Blasio က ပြောခဲ့သည်။
ယင်းအနက် အမျိုးသမီး ၄ ဦး၊ အမျိုးသား ၃ ဦးနှင့် အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ယောကျ်ားလေးတစ်ဦးတို့မှာ လူနေအိမ်ရာအတွင်းရှိ နေအိမ်များ၏ မြေအောက်ထပ်များတွင် သေဆုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နယူးယောက် ရဲဌာန ရဲမင်းကြီး Dermot Shea ၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ NBC သတင်းအရ သိရသည်။
ခရီးသွားလာသူ အမြောက်အများသည်လည်း နယူးယောက် မြေအောက်ရထားဘူတာရုံများတွင် ညလုံးပေါက် သောင်တင်နေခဲ့ပြီး အချို့မှာ ၎င်းတို့သွားချင်သောနေရာများသို့ သွားရန် ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းများ မရှိသဖြင့် ခုံတန်းရှည်များတွင် အိပ်နေခဲ့ရကြောင်း ဒေသတွင်းမီဒီယာသတင်းများ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ပင်ဆယ်လ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်တွင် လူ ၃ ဦး၊ မေရီလန်းပြည်နယ် ၁ ဦးနှင့် Connecticut တွင် ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းက ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံတစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းမှာ ရေဖုံးလွှမ်းမှုအတွင်း ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် Philadelphia ဒေသရှိ လမ်းအချို့တွင် ရေလွှမ်းနေခဲ့ခြင်းကြောင်း မြို့၏ ရထားနှင့် ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုများ နှောင့်နှေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း အမြောက်အများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ပြည်နယ် အရေးပေါ်အခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ ညွှန်ကြားရေးမှူး Randy Padfield ၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ CNN သတင်းက ဖော်ပြထားသည်။
နယူးယောက်စီးတီး မြို့တော်ဝန် de Blasio က အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင် Ida မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန်များကြောင့် “မြို့တစ်ခွင် စံချိန်တင် မိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူ ဆိုးဝါးသောရေလွှမ်းခြင်းနဲ့ လမ်းမများမှာလည်း အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သမိုင်းဝင် ရာသီဥတုအခြေအနေ” ဟု ကြေညာခဲ့ပြီး တစ်နာရီခန့်အကြာ နယူးယောက်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kathy Hochul ကလည်း စက်တင်ဘာ ၂ ရက် အစောပိုင်းတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော့်အဖွဲ့ ဖက်ဒရယ် အရေးပေါ်အခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ (FEMA) က မြေပြင်မှာ ရောက်ရှိနေပြီး လိုအပ်တာတဲ့ အကူအညီတွေအားလုံး ပံ့ပိုးပေးဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားထားပါတယ်”ဟု သမ္မတ ဂျိူးဘိုင်ဒန်က စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၌ ပြောခဲ့သည်။
Ida မုန်တိုင်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းသို့ မရွေ့လျားမီ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း လူဝီစီယားနားနှင့် မစ္စစ္စပီ ပြည်နယ်များ၌ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့ပြီး လူ ၄ ဦးသေဆုံးကာ ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာလည်း လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်၏ ကက်ထရီနာဟာရီမုန်တိုင်း (Hurricane Katrina) တိုက်ခတ်မှု ၁၆ နှစ်ပြည့်ခဲ့သော ဩဂုတ် ၂၉ ရက်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် Ida မုန်တိုင်းသည် ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်တွင် လော်ရာဟာရီကိန်း (Hurricane Laura) နှင့် ၁၈၅၆ ခုနှစ် Last Island Hurricane များနည်းတူ လူဝီစီယားနားပြည်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သော အပြင်းထန်ဆုံး မုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ မုန်တိုင်းသည် ဩဂုတ် ၃၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အပူပိုင်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အဖြစ် အားလျော့သွားခဲ့ပြီး မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းဖြင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Sept.2(Xinhua) — Torrential rains, floods and tornadoes from storm Ida remnants claimed more than 40 lives across the northeast of the United States on Wednesday and Thursday.
“The majority of these deaths were individuals who got caught in their vehicles by flooding and were overtaken by the water,” Governor Phil Murphy tweeted.
In the Philadelphia area, some streets were swamped, delaying the city’s rail and bus services and causing thousands of rescues, according toaCNN report, citing state Emergency Management Agency Director Randy Padfield.
New York Governor Kathy Hochul declaredastate of emergency early Thursday about an hour after New York City Mayor Bill de Blasio declared one due to what he calleda“historic weather event … with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads” as Ida remnants raced up the East Coast.
“There’salot of damage, and I made clear to the governors that my team at … FEMA (the Federal Emergency Management Agency) is on the ground and ready to provide all the assistance that is needed,” U.S. President Joe Biden said Thursday.
Ida landed on Sunday, the 16th anniversary of Hurricane Katrina’s destructive strike, tying with 2020’s Hurricane Laura and the Last Island Hurricane of 1856 as the strongest ever to hit Louisiana. It was downgraded toatropical depression on Monday afternoon and moved inland with torrential rain. ■
1- People walk in rain caused by Hurricane Ida, in Times Square in New York, the United States, Sept. 2, 2021.(Xinhua/Wang Ying)
2- Vehicles are submerged onawaterlogged road in New York, the United States, Sept. 2, 2021. (Xinhua/Wang Ying)